decapsulator vacuum Tani waa la heli karo oo dhan kaabsoosha oo cabbirkooda, ma qaybo ka beddelo loo baahan yahay.
• helidda budo ka daahirane ah, qolofka lahayn Ahaysiinay.
• Ku dhawaad ​​100% kaabsal heerka furan.
• Save waqti iyo qashinka.
• Deal la kaabsoosha aan caadi ahayn ee xawaaraha sare.
• Sababta gabi ahaanba waxyeello ku dhicin in ay awood / kaabsal / kiniin gudaha kaabsolka.
• Khusayso kasta kaabsoosha oo cabbirkooda.
• Air waa wax xiriir oo kaliya budada; faddarayn lahayn.
• qolofka kaabsal la isticmaalayo dib markii soociddiisa.
• haboon in ay ku shaqeeyaan, meesha iyo sii wadida.
Sooc CS Model Technical
000 #, 00 #, 0 #, 0el, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # iyo kaabsoosha kale adag
Previous: Machine Deblistering ETC-120AL
Capsul e kala
macneysey kaabsol Buuxinaya
Sida loo heshiiska Iyadoo kaabsoosha Bad
Sidee Si aad u fur kaabsoosha
Waxyaabaha Ujrooryinka Machine
Caps Pharmaceutical ule Bixiyaha Solution
Recovery Of Product From kaabsoosha